युआरएल र संगम सहकारीको सयुक्त स्वास्थ्य शिविर, ३ सय जना लाभान्वित – Sabaikoaawaj.com
युआरएल र संगम सहकारीको सयुक्त स्वास्थ्य शिविर, ३ सय जना लाभान्वित
आइतवार, अशोज २९, २०७४ 11:50:35 AM	मा प्रकाशित
संगम बचत तथा ऋण सहकारी रामबजार र युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी प्रालि(युआरएल)को संयुक्त आयोजनामा शनिबार भएको निःशुल्क मधुमेह तथा रगतमा हुने खराब बोसो (टिजी) सम्बन्धी रक्त परीक्षणमा ३ सय ९ जनाको परीक्षण गरिएको छ । युआरएलले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै विभिन्न संघ, संस्थासँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको यो ४० औं शिविर हो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. आशीष त्रिपाठीले वंशाणुगत, खानपिन र रहनसहनका कारणले बढी रोग लाग्ने गरेको बताए । उनलेरोग लाग्नुअगावैको सतर्कता र सुरुकै अवस्था उपचार पाए धेरै रोग निको हुन सक्ने बताए । उनले भने, ‘रोगले ठूलो बिगार नगरेसम्म हामी उपचारतिर लाग्दैनौं । यसले गर्दा ठूलो कष्ट र आर्थिक बोझ पनि बेहोर्नु पर्छ ।’
युआरएलका प्रबन्ध निर्देशक ठाकुरप्रसाद पन्तले प्रदेश नं. ४ लाई प्रयोगशालाको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा आफूहरु लागेको बताए । राजधानी र विदेश पठाउनुपर्ने संवेदनशील परीक्षणसमेत पोखरामै उपलब्ध गराउँदै साथसाथमा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह पनि गरिरहेको उनको भनाइ छ । पन्तले भने, ‘यो क्षेत्र व्यापारमात्र गर्ने क्षेत्र होइन, मान्छेको जीवन रक्षा गर्ने क्षेत्र हो । हामी यही दायित्व निर्वाह गरिरहेका छौं ।’
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं १५ का वडाध्यक्ष प्रकाश पौडेलले सहकारीहरु सिद्धान्त अनुरुप सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । उनले सामाजिक दायित्व वहन गर्दै सरसफाइ, शिविर, रक्तदान जस्ता कार्यले सहकारीलाई जनतासँग जोड्ने उल्लेख गरे ।
सहकारीका अध्यक्ष निरज थापाले स्वस्थ मानिसले मात्र सिर्जनात्मक र समृद्धिमूलक काम गर्न सक्ने भएकाले यस प्रकारका काम सहकारीले गरेको बताए । उनले करिब २ हजार संगम सहकारीका सदस्य रहेको जनाउँदै उनले सेयर सदस्य र सर्वसाधारणलाई लाभ हुने खालका गतिविधिलाई निरन्तरता दिने प्रण गरे ।
सहकारीका अध्यक्ष निरज थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत उपाध्यक्ष तथा कार्यक्रम संयोजक यामबहादुर रानाभाटले गरेका थिए । कार्यक्रममा सहकारीका व्यवस्थापक अपील कोइरालाले पनि बोलेका थिए ।
प्रकाशित मितिः आइतवार, अशोज २९, २०७४ 11:50:35 AM